UMark kaMenzi unentlalontle phantsi komgqomo-Amanzi amaninzi eSebe, nceda! | Martech Zone
Lwesine, ngoFebruwari 21, 2013 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 UMarty Thompson
Kutshanje ndiye ndafunda iposti ngaphezulu Icawa yoMthengi, ebhalwe nguJackie Huba kunye noBen McConnell (abantu ababini abakrelekrele kweli shishini), malunga ne-hoopla engaphezulu UMark weMark. UMenzi kaMark luphawu olunye phantsi kweambrela ye Intsapho ye-Beam yeemveliso.
Nditsho nomhlobo wethu ongaphaya eRaidious, eDodge Lile, wangenelela ngoqwalaselo lobulumko. Kubonakala ngathi uMark kaMenzi ebegqibe ekubeni angxenge imveliso yabo ukuze yolule uluhlu oluqhubekayo, kwaye ngaloo ndlela ahlangabezane nemfuno ekhulayo. Ukubuyela umva ukuba uphawu loMenzi kaMark lwasweleka ngokwabelana ngesigqibo ngewebhusayithi yabo, kwaye amajelo entlalontle ayelungile, masithi nje bendizokusela ibourbon ngakumbi mva nje ukuba bendinguRob okanye uBill Samuels.
Uninzi lwamagqabantshintshi endikhe ndalifunda, i IKlabhu yeNtlalontle kaMarki ngoku ibonakaliswe njengomsindisi, njengomlungisi wekhosi elungileyo, okanye amajelo okutshixa izigqibo ezingalindelekanga ezimbi. Kodwa ndineenkcazo ezimbalwa ezongezelelweyo, ukuqaphela, kunye neengcebiso. UMark kaMenzi ngokuqinisekileyo uye waqonda ukuba kukho ii-brand, emva koko zikho iimveliso.
Uninzi lweemveliso ngaphakathi kwipotifoliyo yemveliso kwi-Beam ngokuqinisekileyo ngekhe ziphantsi koqwalaselo olunjalo apho kuqulunqwa khona. Kodwa kuthekani ngeLaphroaig? Ardmore? I-Courvoisier? Zonke ezi ziimpawu zeBeam. Andikwazi ukucinga ngesigqibo esivuthayo, esilula ngaphandle kokuphazamisa iimveliso eziye zazama ukuvavanywa kwexesha. Kodwa linda, ngaba indawo yentengiso iyaluqonda utshintsho kwezi mveliso kule minyaka idlulileyo? Ngaba zenziwe iinguqu ngaphandle kokwazisa umboleki? Andiyiqondi.
Inqaku lam yile. Nje ukuba ube nophawu, imveliso, wena njengomboneleli oyiqondayo ukuba iphantse yangcwele, ngaba uyalwenza utshintsho olukhulu kuyo, ngaphandle konxibelelwano kunye nengxelo evela kumthengi? Uninzi lweemveliso ezinkulu ziya kuba nokunyaniseka emva kwexesha elide emva kokuba abaphathi bezentengiso kunye nemikhosi yabo yeenyosi ezingabasebenzi iqhubela phambili kwiimpawu ezintsha, kwiinkampani ezintsha. Kulapho iimveliso ezininzi zisilelayo kwindlela abajonga ngayo besebenzisa imidiya yoluntu.
Bajonge kwimidiya yoluntu njenge elinye nje ijelo, ngaphandle kokwakha indawo ekuhlaleni yamagqwetha asebenza ngokusebenzisana nophawu. Akunakuyenza le nto ngeTwitter nakuFacebook kuphela, kwaye wakhe ubudlelwane obuzinzileyo noluncedo. Ngokuqinisekileyo, la maqonga asentlalweni anokusetyenziswa njengeendlela zonxibelelwano eluntwini, kodwa kubalulekile ukwakha i-portal eqinileyo, iqela ekugxilwe kulo ukuba uyafuna, kwaye ulisebenzise njengendawo yokunxibelelana. Ngaba oku kuyafana nokugxotha abantu abaninzi? Akunjalo. Uphawu lwakho lunoluvo oluncinci lokuba ngubani kwisihlwele, kwaye yeyiphi imibala abayinxibileyo.
Ingxaki yeBourbon ikwabonisa enye yezona zinto zibalulekileyo zibalulekileyo zentengiso kwinkulungwane yama-21. Ukuthengisa akukho kwisithuba, kuthathwe kwiiholo zolawulo lwemveliso, inkxaso kubathengi, kunye nesigqeba solawulo. Kufuneka ibandakanyeke ngokusondeleyo kwizigqibo eziphambili ezichaphazela uphawu, naphina apho uphawu lunxibelelana khona nomthengi. Esi sisithembiso sokwenene sendlela ekumele ukuba isetyenziswe ngayo kwaye kufuneka isetyenziswe njani, kuba izithintelo ezazikhona ngaphambili ngoku azibalulekanga kangako. Nangona kunjalo, akufuneki sijonge kuzo zonke izinto zentlalo njengomqhubi osemva kwale nzame. Kwaye ukwenza ngenye indlela kukuphendula kakhulu kwibala lehlabathi elinentlalontle. UMark kaMenzi wanyanzelwa ngokoqobo ukuba abe yikona, kwaye wabeka iqela lokuthengisa leBeam kwindawo ebonakala iphikisana nekhowudi yabo yokuthengisa.
Intengiso kunye nentengiso kufuneka: "Bonisa kuphela ulwazi oluyinyani malunga namandla otywala kwaye ungagxininisi kumandla otywala njengeyona nto ilungileyo yophawu." Ikhowudi yokuthengisa ye-Beam.
Nokuba unguMaki kaMenzi, okanye naluphi na uphawu, thatha ixesha, kwaye wenze umzamo wokusebenza nzima emfihlekweni, ngaphambi kokuba uxhomekeke kubukumkani bezentlalo ukusombulula zonke iingxaki zakho. Kwaye usele ngokufanelekileyo.
tags: Ibhokhweukuthengisa umqadiuhloboUkufaka uphawuumphakathijim umqadiuphawu lwabenziImidiya yokuncokola
Ndingumcebisi weqhinga kwezorhwebo kwintengiso yeBhanana ezimbini. Ndibeke ityala kubazali bam, ukukhuliswa kwam ngentliziyo, okanye ukuthanda kwam ixesha elidlulileyo, kodwa abantu bandixelele ukuba ndilungile, ngokwenyani kulwalamano lokwakha kunye nokuthethathethana, ukuvala umsantsa phakathi kokulindelwe ngabathengi, kunye neenkampani ezinkulu ekufuneka zibekhona (kodwa ngesiqhelo hayi)
Ukuhamba komsebenzi kweMveliso ye-infographic
Feb 22, 2013 ngo-2: 41 AM
Ndifumana isizathu sokuba bafuna ukwenza utshintsho, kodwa yayisisigqibo esibi kwasekuqaleni. Ndathi ndakuyiva ezindabeni ndahleka nomfazi wam ndathi “Ewe ayizukusebenza kakuhle loo nto.” kwaye jonga .. ayizange.
Feb 22, 2013 ngo-10: 59 AM